Guardiola oo sii balaariyay kooxaha xili ciyaareedkan u sharaxan inay ku guuleysan karaan Premier League – Gool FM
(England) 06 Feb 2019. Macalinka kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in kooxaha Manchester United, Chelsea iyo Tottenham ay heli karaan fursad ay ugu tartami karaan horyaalka Premier League.
Shabakada “Sky Sports” ee dalka England ayaa soo xigatay wareysi uu bixiyay macalinka reer Spain ee Pep Guardiola waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Marna ma dhihin in Tottenham iyo Chelsea ama mid kasta ee ka mid ah 6-da kooxood ee ugu sareeysa Premier League xitaa Manchester United oo guulo muhiim ah gaareysa dhawaanahan, inaysan qeyb ka ahayn tartanka loogu jiro horyaalka”.
“Hadii Chelsea ay gaarto guulo xiriir ah, waxay sidoo kale ka mid noqon doonaan kuwa ugu cad cad ee ku guuleysan kara Premier League, cid kasta qeyb ayay ka tahay tartanka horyaalka, sababtoo ah farqiga ma ahan mid aad u weyn”.
“Dhmaan kooxaha waxay u sharaxan yihiin inay ku guuleystaan horyaalka, kuwa aan musharaxa ahayn waxay awood u leeyihiin inay dhibaatooyin ku abuuraan tartamayaasha”.
Waxaa xusid mudan in kooxda Manchester City ay 3 dhibcood kaliya u jirto hogaamiyaasha horyaalka ee Liverpool, kadib barbarihii 1-1 ahaa ay la galeen kooxda West Ham.
Si kastaba Manchester City ayaa caawa isku diyaarineysa kulanka adag ay kula ciyaari doonaan kooxda Everton horyaalka Premier League.